फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गरिन् खाना भत्ताको रकम ३०० यूरो - Himali Patrika
५ असार २०७८, शनिवार
फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गरिन् खाना भत्ताको रकम ३०० यूरो
हिमाली पत्रिका २० जेष्ठ २०७८, 6:53 pm
हेलसिन्की । फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले आफ्नो परिवारलाई करतादा सहुलियतमा आउने खाजाको पैसा तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
३५ वर्षीया प्रधानमन्त्री मरिनले आफ्नो परिवारको सहुलियतको ब्रेकफस्टको पैसा १४ हजार यूरो राज्य कोषमा बुझाउने भएकी हुन् । उनले डेढ वर्षअघि कार्यालय लिएपछि निवासमा आउने बिहानको खाजा र चिसो खानाको वापत सहुलियत पाएकी थिइन् ।
उक्त सहुलियत वापत उनले राज्यलाई रकम तिर्ने भएकी हुन् । “किनकि खाना भत्ताको सम्बन्धमा खुला रुपमा प्रश्नहरु उठेका छन् । म सम्बन्धित खर्च आफैँ भुक्तान गर्नेछु,” प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले शनिबार भनेकी छन् ।
मंगलबार उनले आफूले भविष्यमा पनि खाना भत्ता नलिने घोषणा गरेकी छन् । “म भविष्यमा पनि खाना भत्ता लिने छैन । यदी यो सुविधा नियम अनुसार नै भए पनि,” उनले भनिन् ।
यस्तै उनले यस्ता खाना भत्ता कानून सम्मत छन् कि छैनन् भन्ने बारे छिट्टै निर्धारण गर्न र कर तिर्न लगाउन पनि अधिकारीहरुलाई बताएकी छन् ।
“मलाई मेरो परिवारको खाना लगायत विषयमा दिन बिताउन भन्दा पनि अरु धेरै जिम्मेवारी छन्” उनले भनिन् । स्थानीय ट्याब्लोइड पत्रिका इलतालेतीले प्रकाशन गरेको रिपोर्ट अनुसार प्रधानमन्त्री सन्नाले केसारान्तास्थित कार्यालयको निवासमा रहँदा प्रतिमहिना ३०० यूरोका दरले बिहानको खानाको भत्ता सरकारसँग दावी गरेकी थिइन् ।
तर उनले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफूले कहिल्यै यस्तो दावी नगरेको र यस्तो निर्णय नगरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । फिनल्याण्डमा असमानताको झिनो स्तरलाई यहाँको राष्ट्रिय गौरव मानिन्छ । साथै नेताहरुको सादा जीवनशैलीले यहाँको सुशासन सम्भव भएको बताइन्छ ।
२०१९ को डिसेम्बरमा अत्याधिक जनसमर्थनका साथ ३३ वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा सन्ना मरिन विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरकी प्रधानमन्त्री तथा कम उमेरकी महिला प्रधानमन्त्री थिइन् । उनको गठबन्धन सरकारमा वहुसंख्यक मन्त्री महिला र ३५ वर्ष मुनिका छन् ।
मेलम्ची : जब पाँच गोदाम खाद्यान्नका मालिक भोकै भए…
अदालतले दियो ओली सरकारलाई अर्को झट्का : चुरेको गिट्टी, बालुवा…
गंगामा तैरिरहेको बाकसभित्र भेटिइन् २१ दिनकी बच्ची, बाहिर निकाल्ने आँट…
मल्टिपल इन्ट्री भिसा भएका नेपालीहरु खोप लगाउनकै लागि अमेरिका जान…
अनेरास्ववियुको राहत वितरणमा माओवादीले हस्तक्षेप गरेपछि
केही दिन मौसममा सुधार हुने, निरन्तर ठूलो पानी पर्ने सम्भावना…
शान्ति सेनामा नेपाल तेस्रो नम्बरमा, भारत र पाकिस्तानभन्दा नेपाल अघि
मेलम्ची । मेलम्ची बजारको उत्तरी छेउमा अवस्थित एक खाद्यान्न पसलको भुइँमा बीस प्याकेट तोरीको तेल सुकाइएको छ । छेउमा ६१ वर्षीय ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ झोक्राएर बसिरहेका…
चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । सो रिटबारे सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश…
भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको गाजिपुरस्थित ददरीघाटमा गत सोमबार बिहान गंगा नदीमा एउटा प्लाइउडको बाकस बग्दै-बग्दै आइरहेको थियो। सोमबार गंगामा स्नान गर्न गएकाहरूले बाकसबाट बच्चा रोइरहेको…
काठमाडौं । मल्टिपल इन्ट्री भिसा भएका नेपालीहरु खोप लगाउनकै लागि अमेरिका जान थालेका छन् । अमेरिकाले विदेशी पर्यटकका लागि पनि सजिलै कोरोनाविरुद्धको खोप दिन थालेपछि…
रोनाल्डो र मेसी भन्दा दशौँ गुणा सम्पति, यी हुन् विश्वकै…
विश्वका धनाढ्य फुटबलको को होलान् ? धेरैलाई मेसी, रोनाल्डो वा नेइमार भन्ने लाग्ला । तर, विश्वका धनाढ्य फुटबल युरोप वा दक्षिण अमेरिका नभएर एशियाका हुन्…
युरोपको एउटा ‘फुच्चे’ देश कसरी फुटबलको महाशक्ति बन्यो ?
रोनाल्डोले दुईवटा बोतल हटाइदिँदा कोकाकोलाले ४ खर्ब ६९ अर्ब गुमायो
यूरो २०२० को पहिलो खेलमै रोनाल्डोको दुई कीर्तिमान
जोर्डनसँग पराजित भएसंगै कतारमा विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना समाप्त
पेनाल्टीले बिगार्यो : प्रशिक्षक अलमुताइरी